कति पढ्दा वा अध्ययन गर्दा पुग्ने हो ? | EduKhabar
कति पढ्दा वा अध्ययन गर्दा पुग्ने हो ?
डा. हरिप्रसाद लम्साल
मैले विद्यालय तहमा पढेका सबै विषयवस्तुको प्रयोग मेरो जीवन कालमा होला कि नहोला ? खै यस बारेमा अरुले के सोचेका छन् थाहा छैन, तर मलाई भने अहिले आएर सोच्नु पर्छ भन्ने लागेको छ । किनकी त्यति बेला पढेका कतिपय विषयवस्तु त अहिले सम्म पनि प्रयोग भएनन् भने अबका दिनमा के प्रयोग होलान् ? अहिले सम्म प्रयोग नभएकोले पछि पनि प्रयोग नहोलान् । सर तथा मिस/मेडमले भने पछि घरमा बुबा आमासँग रोइकराई गरेर उबेलामा ज्यामितीय बक्स किनियो । तर त्यस भित्र रहेका सबै सामग्रीको प्रयोग कहिले पनि गर्न पाइएन, जानिएन वा गर्न सकिएन । ती सामग्रीहरु के के कामका लागि राखिएका थिए भनेर कसैले पनि बताएनन्, बताउन आवश्यक नठानेका पनि हुन सक्छ । यस बारेमा सर मिससँग सोध्न पनि सकिएन वा आवश्यकनै ठानिएन । ठूला बडाले जे जे भने सो काम गर्दै यहाँसम्म आइपुगियो ।
त्यति बेला र अहिलेको अवस्थामा भने ठूलो फरक छ । उ बेलामा त हामीले थाहा नपाइकन पढ्यौं । अहिले हामीले हाम्रा बाल बच्चालाई जे जति मात्रामा पढाइरहेका छौं, के ती सबै पढ्नै पर्ने विषय वा सामग्री हुन त ? के हामीले यस बारेमा प्रश्न गर्ने गरेका छौं ? कसैलाई सोधेका छौं ? विगत भन्दा अहिले त झन् बढि विषयवस्तु पढाउन थालिएको छ । तर हामी सबै चुपचाप यसको पालना गरिरहेका छौं, बडा आज्ञाकारी भएर । अहिले हामीले जे पढाएका छौं सो पछिका दिनमा पढ्दा हुने कि नहुने भनेर कसैले प्रश्न सोध्ने गरेका छैनौँ ।
माथिको विषयका बारेमा निष्कर्ष निकाल्नु अघि व्यक्तिले किन र के का लािग पढ्ने भन्ने बारेको सैद्धान्तिक बहसमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आखिर व्यक्तिले किन पढ्नु पर्छ ? वा किन अध्ययन गर्नुपर्छ ? स्वभाविक रुपमा भन्न सकिन्छ, अध्ययनले व्यक्तिको ज्ञानको दायरा बढाँउछ, सीप विकास गराँउछ, धारणामा परिवर्तन ल्याउँछ । अध्ययनले नै नयाँ नयाँ ज्ञान र प्रविधिको विकास गर्न सहयोग गर्छ । यी सबै कार्यबाट मानव समाजलाइ अझ उन्नत दिशातर्फ लैजान सहयोग गर्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा अध्ययन वा पढाइले मानव भलाइका कार्यमा सहयोग गर्न सक्छ । सुक्ष्म रुपमा भन्ने हो भने पढ्नु वा अध्ययन गर्नु भनेको व्यक्तिको भावी जीवन सहज, सरल र आत्मसम्मान यूक्त बनाउन सहयोग गर्नु हो । अझ साँघुरो अर्थमा पढ्नु वा अध्ययन गर्नु भनेको रोजगारी वा स्वरोजगारीमा संलग्न हुनु पनि हो । के कति विषय वा तह पढ्दा माथि भनिएका यी सबै काम हुन सक्लान् त ? कतिपय ठूला उद्यमीले औपचारिक शिक्षा लिएकै छैनन् भन्ने पनि सुनिन्छ । उनीहरु आफ्ना व्यवसायमा अब्बल देखिएकै छन् । अर्को तिर कतिपय माथिल्लो योग्यता भएका व्यक्ति पनि बेरोजगारका रुपमा रहेका छन् । आखिर पढ्ने वा अध्ययन गर्ने वित्तिकै रोजगारी वा स्वरोजगारी हासिल हुने भएको भए त यस्तो नहुनु पर्ने हो ! कति र के पढ्ने वा अध्ययन गर्ने विषय प्रमाणपत्र मात्र हासिल गर्ने भन्दा अझ बढि व्यक्तिमा सोच वा चेत विकास गर्ने पक्षसँग पनि सम्बन्धित हुने देखियो । यसले त व्यक्तिले प्रमाणपत्र हासिल गर्नु र भित्रै देखि क्षमता विकास गर्नु फरक विषय हुन् भनेर देखाउन पनि सक्ने जस्तो देखियो ।
माथि जे भनिए पनि विज्ञहरु पढ्नु वा अध्ययन गर्नु र रोजगारी वा स्वरोजगारी हुनुको बीचमा सम्बन्ध रहेको हुन्छ भन्ने गर्छन् । तर यसको लागि शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ भनिन्छ । गुणस्तरीयताको परिभाषा पनि विगत र अहिले फरक हुन थालेको छ । यहाँ शिक्षा गुणस्तरीय हुनुपर्छ भन्नुको मतलब व्यक्तिमा बजारले खोजेको ज्ञान, सीप र क्षमता हुनुपर्छ भन्ने नै हो । अब त शिक्षा भनेको बजारलाई चाहिने क्षमता भएको व्यक्ति उत्पादन गर्ने विषयको रुपमा दरिन पुग्यो भने शिक्षा प्रणाली एक कारखानामा सिमित हुन पुग्यो । शिक्षाका विषयवस्तुु र शिक्षा प्रणालीलाई बजारले नियन्त्रणमा राख्न थाल्यो । बजारमा जे बिक्छ, शिक्षा प्रणालीले त्यहि विषय विद्यार्थीलाई पढाउनु पर्ने भयो । यसले त शिक्षाको अर्थ र परिभाषा नै बदल्यो । यहाँनेर शिक्षाको अर्थ केबल व्यक्तिलाई चाहिएको ज्ञान र सीप (जुन बजारले खोजेको छ) विकास गर्नेसँग मात्र सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । विगतमा बजार बलियो थिएन, विद्धानले पढ्नुपर्छ भनेका विषयहरु विद्यालयमा पढाउने गरिन्थ्यो । अहिले आएर विद्धान भन्दा पनि बजार बलियो भएर आयो । विद्धानले भन्ने ठाँउमा बजारले हस्तक्षेप गर्न थाल्यो । अब त के पढ्नु पर्छ भन्दा पनि बजारले जे माग्छ त्यहि पढ्नु पर्छ वा पढाउनु पर्छ भन्ने अवधारणा बनाउन थालियो । यदि त्यसो हो भने बजारको आवश्यकता अनुसार पढाउनका लागि अहिलेका विषयमा थप परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ ।
यस्तै यस्तै सन्दर्भलाई समावेश गरेर ‘द इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले सन् २०१७ मा लर्निङ् एण्ड केयरिङ् ( Learning and Caring) नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । यस प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त वर्षको अध्ययनले व्यक्तिको प्रति घण्टा ९ देखि १३ प्रतिशत सम्म कमाइमा वृद्धि हुने देखाएको छ । भन्नुको मतलब अध्ययन गरे पछि रोजगारी पाइन्छ, कमाइ हुन्छ भन्ने नै हो । यहि प्रतिवेदनले अमेरिकामा अध्ययनको तह बढ्दै जाँदा बेरोजगार हुनेको संख्या घट्दै गएको उल्लेख गरेको छ । तर यस्तो पढाइ बजारले खोजे अनुसार हुनुपर्छ भन्ने हो । शैक्षिक प्रमाणपत्र भएर पनि बजारले खोजे अनुसार सीप भएन भने त्यसले काम नगर्ने निश्चित जस्तै भइसक्यो । जता सुकै सीप चाहिन्छ भन्न थाल्नुको पछाडिको कारण पनि यहि नै हो । यस दृष्टिकोणबाट पनि हामीले अहिले पढाएका विषयहरुका बारेमा एक पटक सोच्नुपर्ने देखिन्छ । किनकी विद्यार्थीमा शुरुमा सफ्ट स्कील हासिल गराउन सकियो भने सैद्धान्तिक ज्ञान त पछि पनि हासिल गर्न गराउन सकिन्छ भन्ने मत प्रबल बन्दै गएको छ ।
नेपाल पनि ‘द इकोनोमिस्ट’ पत्रिकाले भनेको भन्दा अलग अवस्थामा रहन नसक्ला । पत्रिकामा उल्लेख गरिएको अवधारणा ढिलो छिटो नेपालमा पनि अवश्य आउने नै छ । अहिले हामीकहाँ विद्यार्थीले अध्ययन गर्नुपर्ने वर्षमा अत्यधिक मात्रामा वृद्धि भएको छ । द इकोनोमिस्टको उक्त लेखमा स्नातक तहको सैद्धान्तिक ज्ञानले ठूला ठूला कम्पनी सञ्चालन गर्ने योग्यता हासिल गर्न सकिन्छ । स्नातक पछि सीप विकासका विविध कम्पोनेण्ट यस योग्यतामा जोड्न सकेमा मात्र व्यक्ति बजारमा बिक्न सक्छ भनिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा विगतका दिनमा २ वर्ष अध्ययन गरेर पुग्ने स्नातक तहको अवधि अहिले आएर न्यूनतम रुपमा पनि चार वर्ष पु¥याइएको छ । पहिला कक्षा १ भन्दा अघि एक वर्षको शिशु कक्षा वा पूर्व प्राथमिक कक्षा थियो, अहिले आएर सो अवधि बढाइ न्यूनतम पनि ३ वर्ष पु¥याइएको छ । यस्तै अवस्था स्नातकोत्तर तह र सो भन्दा माथीका तहमा पनि रहेको छ । अध्ययन अवधिका साथमा अध्ययन गर्ने विषय पनि बढाइएको छ । के यो सबै आवश्यक छ त ? नेपालमा विद्यार्थीले के कति विषय के कति अवधिका लागि पढ्नु वा अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा बृहत अध्ययन अनुसन्धान भएकै छैन । धेरै समय लगाएर धेरै विषय पढाए पछि अब्बल बन्न र बनाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकतामा हामी सबै दगुरिरहेका छौं । यसमा गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ । थोरै विषय र अविधि पढाउँदा पनि पुग्छ भन्ने बारेमा विदेशी पाठ्यक्रमले देखाइसकेका छन् ।
प्रविधिले मानिसको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएको छ । बजारको संरचनामा फेरबदल ल्याएको छ । उपभोगको संरचना बदलिएको छ । शिक्षाले व्यक्तिलाई यस्ता नयाँ परिवेशमा काम गर्न सक्ने र अनुकुलन हुन सक्ने बनाउनु पर्छ । आज हामी जे पढाइरहेका छौं भोलिका दिनमा त्यसले नपुग्ने निश्चित छ । हिजोका दिनमा जस्तै आज शिक्षा लिएर बसेपछि बाँकी जीवनलाई पुग्छ भन्ने दिन अब गए । प्रविधिको कारण समाजमा परिवर्तनको गति तिब्र छ । यहि परिवर्तनले मानवीय स्वभावमा परिवर्तन ल्याइदिएको छ र यो निरन्तर रुपमा चल्ने देखिन्छ । आज डिग्री लिएको व्यक्तिले आफुलाई निरन्तर मात्रामा अध्यावधिक गर्न सकेन भने केहि वर्षमा फेज आउट हुने देखिन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएको ‘द इकोनोमिस्ट’ ले आफ्नो प्रतिवेदनमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको सहयोगमा आधारित भइ भनेको छ, ‘हाल अमेरिकामा सन् २०१३ मा रहेका पेशा र काम (जब) मध्ये ४७ प्रतिशतले भविष्यमा निरन्तरता पाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ’ । यहि प्रतिवेदनका अनुसार अबका दिनमा कुनै एक विधामा मात्र सीप हासिल गरेर नपुग्ने देखिन्छ । व्यक्तिमा एक भन्दा बढी सीप चाहिने देखिन्छ, जसलाई प्रतिवेदनले ‘हाइव्रिड जब’ भनेको छ । तर यस्ता सीपहरु निरन्तर रुपमा परिवर्तन हुने हुनाले व्यक्तिले आफुलाई निरन्तर रुपमा अध्यावधिक गरिरहनु पर्छ । यसले पनि के देखाउँछ भने अहिले हामीले पढाइरहेका विषय र विषयवस्तुहरुमा एक पटक पुर्नविचार गर्नै पर्छ ।
विगत केहि वर्षमा व्यक्तिको शिक्षा लिन दिनमा औपचारिक पद्धति बढि र अनौपचारिक पद्धति कम प्रचलनमा थियो । अहिले व्यक्ति औपचारिक पद्धतिबाट जत्तिकै अनौपचारिक पद्धतिबाट पनि प्रभावित भइ रहेको छ, लाभ लिइरहेको छ । सञ्चार र प्रविधिमा आएको परिवर्तनले अनौपचारिक पद्धतिको सिकाइ अझ बढि शक्तिशाली बन्दै गइरहेको छ । व्यक्ति भिन्न भिन्न मोडबाट सिक्न सक्छ भन्ने अवधारणा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । त्यहि भएर अबका दिनमा शिक्षा र तालिमलाई सँगसँगै लैजानु पर्ने जस्तो देखिएको छ । तालिमलाई पनि शिक्षालाई जत्तिकै महत्व दिनुपर्ने देखिएको छ । समयसँगै शिक्षा र तालिमका विषयवस्तु र लिने दिने प्रकृयामा पनि बदलाव चाहिएको छ । तसर्थ अहिलेको मुल प्रश्न शिक्षालाई के कसरी सान्दर्भिक र समयानुकल बनाउने भन्ने हो । शिक्षालाई सान्दर्भिक बनाउनका लागि यसलाई निरन्तर अध्यावधिक र बजारसँग मिल्ने बनाउनु परेको छ । यसका लागि धेरै विषयवस्तु पढाउने भन्दा पनि समय अनुसारका विषयवस्तु पढाउनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि केहि विषयहरु मुख्य आधारभूत विषय मानेर अनिवार्य गर्ने र बाँकी विषयहरु बजारको माग अनुसार थप गर्दै वा परिमार्जन गर्दै जानु पर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ । शिक्षालाई उपभोगमूखी मात्र बन्न नदिनका लागि यस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
शिक्षाले व्यक्तिमा न्यूनतम ज्ञान, सीप र समालोचनात्मक चेत विकास गरिरहनु पर्छ अनि मात्र अन्य पक्ष विकास गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ । शिक्षालाई बजारले मात्र निर्देशित गर्नु भनेको मुलुक विशेषमा रहेका मुल्य मान्यता र संस्कारहरु प्रभावशाली संस्कृतिको मारमा पर्ने हो । किनकी प्रविधिको विस्तार बलियाले छिटो गर्न सक्छन् । यसको असरबाट बच्नका लागि पनि केहि मुख्य विषय अनिवार्य गर्दै बाँकी विषय बजारले निर्देशित गरे अनुसार गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
लम्साल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुन् ।
हिमा चापागाई5 months ago
अबको शिक्षा ब्यवहारिक बनोस।डिग्रीको सर्टिफिकेट लियर बेरोजगार हुन नपरोस लखौ युवाहरू
Gopal Rai5 months ago
डा.हरिप्रसाद सरले कति पढ्दा वा अध्ययन गर्दा पुग्ने हो भन्ने लेख समय सापेक्ष र नेपालको सन्दर्भमा छलफल गर्न लायक विषयवस्तु नै हो । सर्वप्रथम त म लेखको लागि सरलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । सरले ज्यामिति वाकसको वारेमा कुरा गर्नु भएको छ र यसको प्रयोग वारेमा प्रश्न गर्नु भएको छ , जीवनमा यसले के कस्तो सहयोग गरेको छ ? म गणित शिक्षक भएको हैसियतले यस वारेमा केही भन्न चाहान्छु । सरले ज्यामितिको ज्यादै प्रयोग गर्नु भएको छ तर मात्र तपाईले थाहा नपाएको हो जसरी कस्तुरीले आफ्नै नावीबाट आएको सुगन्ध थाहा नपाई र्भौतारिए जस्तै हो । सरले घरमा ऐना झुन्डायउनु परेमा , फोटा भित्तामा झुन्डयाउनु परेमा कति ठाउँ लाग्छ , त्यसको लागि सिधा भाग छ वा छैन सो कुरा ध्यान दिनु हुन्छ यहाँ ज्यामितिको सिधा रेखा सम्बन्धी प्रयोग छ । दुध दुहुदा खेरी टुङग्रो थुनको सिधा राखिन्छ किन कि दुधको धार सिधा आउँछ भन्ने कुराको जानकारी अनपढले पनि बुझेको हुन्छ तर उ ज्यामिति जान्दैन । काठको काम गर्ने सिकर्मीले रंगको धागोले सिधा रेखा बनाएर काठलाई काठ्दछ तर उ ज्यमितिको प्रयोग गरीरहेको छ तर भन्छ ज्यामितिको काम छैन । हर क्षेत्रमा ज्यमितिको प्रयोग छ , गणितको प्रयोग छ तर भन्ने गरिन्छ गणितको काम छैन । यसो भन्नुको कारण त्यसको वारेमा पुर्ण जानकारी नहुनु हो । सरले अर्को कुरा गर्नु भएको समस्या भनेको व्यवहारिक शिक्षा को कमी हो । हाम्रो देशमा पढे लेखेका अब्बल मानिसहरु न्युनमात्रमा बस्न चाहान्छन् सवै विदेशतिर नै जाने उतै वस्ने गर्दछन् । डि.भी.भरेर अमेरीका , कोही अष्टे«ेलिया, वेलायत यस्तै गरी अब्बल मानिसहरु वाहिरीय वा वाहिरीने क्रम जारी छ । देशमा राजनितिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु एक दलले अर्को दललाई दमन गर्नु , भनसुन र दलाल गर्नु , भष्टचार हुनु जस्ता विविध कारणले पढाइमा राम्रा भएकाले कुरा बुझदछन् र आफु वाहिरिन थाल्दछन् । अव नेपालमा हुने जो विद्धान भनिदाहरु पनि २०२८ सालमा पाठयक्रम विकास गर्र्नेहरु आज पनि विद्धानमा कहलिएका छन् । २०२८ सालको पाठक्रयम असफल भैसक्यो तर पनि शिक्षाविद्हरु भने उनीहरु नै हुन् । पुराना मानसिकता बोकेका , पुराना पाठयक्रमबाट उत्पादित भएका , अध्ययन अनुसन्धान नगरेका , भनसुनको भरमा बनेका विद्धानहरुको आडमा निर्माण गरिएको पाठयक्रम हुनाले यो पाठयक्रमले काम गर्न नसकेको सही हो । सरले भन्नु भएको कुरा सही हो कि पढाइले कार्य क्षमतामा वृद्धि गर्नु पर्छ यसको लागि त काम र आवश्यकतामा आधारित शिक्षा तथा तालिम केन्द्रहरु हुनु पर्दछ । हाम्रो शिक्षाले यस प्रकारको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन । रोजगार केन्द्रित पाठयक्रम हुनु पर्नेमा अनावश्यक पाठयक्रम राखिदिएर पढ्न नै नसक्ने गरी अस्तव्यस्त बनाई दिन्छ । नेपालको शिक्षा सके पढ नसके नपढ भन्ने नै हो । सिकारु केन्द्रित , व्यवहारिक , गुणस्तरीय शिक्षा यी सवै नाम मात्रका हुन् खै कसले बुझेको छ ? जे होस् अवको शिक्षा भनेको पुर्णरुपमा रोजगारउन्मुख हुनु पर्छ , अनावश्यक विषयवस्तु थपेर विद्यार्थीलाई तनाव दिनु हुदैन । प्रविधिमैत्री भनेको धेरै सुनियो तर प्रयोगमा आएको पाइदैन । तसर्थ एक्काइसौ शताब्दिको समयसापेक्ष र रोजगारउन्मुख शिक्षा प्रदान गरी दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
LB Dhami5 months ago
ek damai ramro sir